Xasan Sh Maxamuud oo dalka dib ugu soo laabtay (Dhegayso) – Radio Daljir
Xasan Sh Maxamuud oo dalka dib ugu soo laabtay (Dhegayso)
Juunyo 8, 2013 7:10 b 0
Muqdisho, June 8-13, Madaxweynaha Dawlada Federalka ah ee Soomaaliya Md Xasan Sh Maxamuud iyo Wafti uu hogaaminayo ayaa maanta (Sabti June-8-2013) kasoo degey garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaaladda Muqdisho.
Waftiga madaxweynaha oo kasoo laabtay socdaal ay ku dageen dalalka Jaban iyo Kenya ayaa waxaa garoonka kusoo dhoweeyey madaxda dalka, sida Ra’isal Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Md Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid), Gudoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari, Wasiiro, Xildhibaano, Saraakiil ciidan iyo qaybo kala oo ka tirsan Dawlada iyo shacabka Muqdisho.
Madaxweynaha ayaa markii kasoo degey diyaaradii sidey wuxuu mid mid u gacan qaaday dadkii kusoo dhoweynayey garoonka iyadoo loo gudbiyey xarunta Madaxtooyadda ee Villa Soomaaliya.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Dawlada Federalka ah ee Soomaaliya Md Cabdilaahi Cilmooge Xirsi oo saxaafada kula hadlay Garoonka Diyaaradaha ee Muqdisho ayaa sheegay in Madaxweynuhu uu socdaal kaga soo laabtay dadlka Kenya iyo Jaban isagoo sheegay in safarka Madaxweynuhu uu ahaa mid xigmad weyn kujirto.
Halkan ka dhegayso Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya.
Soo laabashada Xasan Sh Maxamuud ayaa kusoo beegmaysa xili mudooyinkii danbe wadanka uu ka taagnaa jaahwareersiyaasadeed kaasoo sababay dagaal gacanka hadal ah oo ka qarxa goboladda qaar, Waxaana arimahaasi lagu eedeeyey Dawlada Federalka inay sababtay .
Radio Hirad, Baahin Jimce 7 June- -2013,